MAPISAREMA 18 Bhaibheri Dzvene | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Urongwa hwekuverenga Bhaibheri Kudzidza Bhaibheri Mapisarema 18 Zvinorehwa Ndima neNdima
Nhasi tichange tichitaurirana nePisarema 18 zvichireva ndima nendima. Uyu Mapisarema mubatanidzwa we Thanksgiving uye kuyera pamusoro pezvakaitwa naMwari uye zvinhu zvaAngaite. Kana iwe uchinyatsonzwisisa hunhu hwaMwari, iwe uchaziva chokwadi chiri muPisarema rino.
Tinonamata kuti apo tave kuda kuongorora rugwaro urwu, mweya washe uzarure kunzwisisa kwedu muzita raJesu. Ndinoraira nemvumo yedenga, nyama haingawani nzvimbo mupfungwa dzedu muzita raJesu. Mweya wehumwari uyo unoburitsa pachena zvinhu zvakadzama zvaMwari unozoshanda nesu apo isu tichienderera mberi muzita raJesu.
Ndichakudai, Ishe, simba rangu. Jehovha idombo rangu, nenhare yangu, nemurwiri wangu; Mwari wangu, simba rangu, wandinovimba naye; nhovo yangu, norunyanga rwokuponeswa kwangu, neshongwe yangu yakakwirira. Ndichadana kuna Jehovha, iye anofanira kurumbidzwa; Naizvozvo ndichaponeswa kuna vavengi vangu. Mabote orufu akandikomba; Uye nzizi dzezvakaipa dzakandivhundusa. Mabote eSheori akandisunga; Misungo yorufu yakandiwira. Pakutambudzika kwangu ndakadana kuna Jehovha, Ndikadana kuna Mwari wangu; Akanzwa inzwi rangu ari mutemberi yake; Kuchema kwangu kukasvika pamberi pake, Nzeve dzake. Ipapo nyika yakazununguka, ikadedera; Nheyo dzamakomo dzakazununguswa, Dzikazununguswa, nekuti akanga atsamwa. Utsi hwakakwira hwuchibva mumhino dzake, Uye moto wakabuda mumuromo make, wakaparadza; Mazimbe akabatidzwa nawo. Akakotamisa kudenga-dengawo, akaburuka; Nerima guru rakanga riri pasi petsoka dzake. Akatasva kerubhi, akabhururuka; Zvirokwazvo, akabhururuka pamapapiro emhepo. Rima akariita nzvimbo yake yokuvanda, dende rake rakanga rakamukomberedza aive mvura yakasviba uye makore gobvu ekudenga. Nokupenya kwakanga kuri pamberi pake makore ake matema akapfuura, nechimvuramabwe namazimbe omoto.
Aya mavhesi ekutanga akasimbisa pasimba raMwari. Munyori wePisarema akazivisa kuda kwake Mwari nekuda kwezvishamiso zvakaitwa nashe. Akataura kuti akachema kuna ishe pakutambudzika kwake uye ishe akamuponesa. Nesimba roruoko rwake rworudyi, akaparadza vavengi vake.
Mwari ane simba guru uye anogara akagadzirira kuponesa vanhu vake. Avo vanodana kuzita raIshe havazo nyadziswe. Kana isu tiri mumatambudziko, iri Pisarema reTariro kwatiri tese kuti Mwari anokwanisa kutinunura kubva kumatambudziko edu. Isu tinongoda kudaidza zita rake uye tichaponeswa.
Jehovha akatinhirawo kudenga-denga, Wokumusoro-soro akataura nenzwi rake; chimvuramabwe namazimbe omoto. Akatuma miseve yake, akavaparadza; akapfura mheni, ndokuvavhundusa. Ipapo migero yemvura yakaonekwa, Uye nheyo dzenyika dzakafukurwa pakutuka kwenyu, Ishe, nekufema kwemweya wemhino dzenyu. Wakatambanudza ruoko rwake ari kumusoro, akanditora, Akandinyukura pamvura zhinji. Akandirwira pamuvengi wangu ane simba, Nokuna vanondivenga, nekuti vakanga vondikurira. Vakandivinga nezuva renjodzi yangu, Asi Jehovha wakange ari mutsigiro wangu. Akandibudisira kunzvimbo yakafarikana, Akandirwira, nekuti aindifarira. Jehovha akandiitira zvakaenzana nokururama kwangu, Zvakaenzana nokuchengeta kwangu. maererano nokuchena kwamaoko angu, akandipa mubayiro. Nekuti ndakachengeta nzira dzaIshe, Handina kubva kuna Mwari wangu nokunyengera. Nekuti zvose zvaakatonga zvakanga zviri pamberi pangu, Handina kusundira kure neni zvaakatema. Ndakanga ndakarurama kwazvo pamberi pake, Ndakazvichengeta pazvakaipa zvangu. Naizvozvo Jehovha wakandiitira zvakaenzana nokururama kwangu, Zvakaenzana nokuchena kwamaoko angu pamberi pake.
Iwe wakanzwa kuti akawanda ari matambudziko evakarurama asi ishe akatendeka kumununura pane zvese izvi. Aiparadza vavengi vako nechimvuramabwe namazimbe omoto. Zvisinei, munhu anofanira kuve akatendeka kuna ishe uye ave akarurama. Chimwe chikamu cherugwaro chakataura kuti Mwari vachakupa mubairo wako maererano nekururama kwangu uye nehutsanana mumaoko angu.
Tinofanira kuona kuti mabasa emaoko edu akachena. Chinyorwa chakataura kuti kana nzira yemunhu ichifadza Mwari, Iye achamuita kuti awane nyasha pamberi pevanhu. Kana nzira dzedu dzichifadza baba, tichawana nyasha kwete kwete chete pamberi pevanhu asiwo pamberi paMwari.
Ane tsitsi munomuitirawo netsitsi; Nomurume wakarurama munomuitirawo zvakarurama; Kune wakachena munomuitirawo zvakanaka; Uye kuna vasina kukodzera munoratidza kusarurama. Nekuti muchaponesa vanhu vanotambudzika; asi unoderedza zvimiro zvepamusoro. Nekuti imwi muchatungidza mwenje wangu; Jehovha Mwari wangu achavhenekera rima rangu. Nekuti nemwi ndichavamba hondo; naMwari wangu ndichadarika rusvingo. Kana ari Mwari, nzira yake yakakwana kwazvo; Shoko raJehovha rakaidzwa; Ndiye nhovo yavose vanovimba naye. Nekuti ndianiko Mwari, asi iye Jehovha? Ndianiko dombo, asi iye Mwari wedu? Ndiye Mwari anondisunga chiuno nesimba, Anokwanisa nzira yangu. Unoita tsoka dzangu setsoka dzenondokadzi, Unondiisa pakakwirira. Anodzidzisa maoko angu kurwa; Naizvozvo maoko angu anobwembura uta bwendarira. Makandipawo nhovo yokuponesa kwenyu, Ruoko rwenyu rworudyi rwakanditsigira, Uye unyoro bwenyu hwakandiita mukuru.
Mwari anobata nesu mabatiro atinoita vamwe. Iwe unoziva chikamu chemunamato washe chakataura kuti tiregerere isu edu ekufamba-famba sezvo isu tichiregerera avo vanotitadzira. Kana tichiregerera vamwe vanhu, Mwari vacharegererawo zvivi zvedu. Saizvozvovo patinoratidza tsitsi kune vamwe vanhu, Mwari vanozotinzwirawo ngoni.
Ndima idzi dzakangotaura kuti Mwari anorondedzera sei nesu apo patinozviratidza pamberi pake.
Makandiitira nzvimbo yakafarikana pandingatsika; Uye tsoka dzangu hadzina kutedzemuka. Ndakateverera vavengi vangu, ndikavabata, Handina kudzokazve kusvikira vapedzwa. Ndavakuvadza, vakakoniwa kumuka; Vachawira pasi petsoka dzangu. Nekuti makandisunga chiuno nesimba rokurwa naro; Makandikundisa vaindimukira. Makatizisa vavengi vangu, Kuti ndiparadze vanondivenga. Kuti ndiparadze vanondivenga. Vakachema, asi kwakanga kusino muponesi, Kuna Jehovha, asi haana kuvapindura. Ipapo ndakavapwanya-pwanya seguruva pamberi pemhepo; Ndakavarashira kure samatope enzira dzomumusha. Makandirwira pakukakavadzana kwavanhu; Makandiita musoro wendudzi; Vanhu vandakanga ndisingazivi, vachandishumira. Kana vangonzwa nezvangu, vachateerera kwandiri; Vatorwa vachanamata kwandiri. Vatorwa vachatorerwa simba, Vachabuda pavaivanda vachidedera. Jehovha mupenyu; dombo rangu ngarikudzwe; Mwari wokuponeswa kwangu ngaakudzwe. Ndiye Mwari unonditsivira, unoisa vanhu pasi pangu. Anondirwira kuvavengi vangu; Zvirokwazvo, munondisimudzira kumusoro kwavanondimukira; Munondirwira pamunhu anomanikidza. Naizvozvo ndichakuvongai Ishe, pakati pendudzi, Ndichaimbira zita renyu nziyo dzokurumbidza. Anopa mambo wake kuponeswa kukuru; uye anozviratidza Ngoni Kuna iye muzodzwa wake, Kuna Dhavhidhi, nokuvana vake nokusingaperi.
Nekuda kwekuropafadzwa kukuru nekusunungurwa kwaIshe, Munyori wePisarema arikutenda Mwari. Kutenda kuvhura musuwo wesimba rekunze kwatiri. Kana isu tichipa kutenda kuna ishe, zvinovhura imwe maropafadzo ayo achiri kuzoburitswa kwatiri.
Previous nyayaMapisarema 78 Zvinoreva Ndima Ndima
inotevera5 Ndima yeBhaibheri Unofanirwa Kuziva Nemusoro uye Sei
Zvidzidzo zveBhaibheri Zvokudzidza Kubva Munyaya yaJudhasi Iskarioti uye Mupostori Petro
Kunamata Kunongedzera Kuti Uti Kana Iwe Uchifanira Kuita Sarudzo
20 ndima bhaibheri pamusoro pemakomborero uye kubudirira